Exynos 9825: processor nke Galaxy Note 10 | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga e gosipụtara na Ihe ngosi 10 dị na Galaxy ga-eji ihe nhazi ọhụụ. Atụmatụ ọhụrụ sitere na Samsung, nke na-ejikarị otu mgbawa ahụ na njedebe ya kwa afọ, mana ha na-agbanwe afọ a. Ihe nhazi a abụrụla onye ọrụ, awa ole na ole mgbe e gosipụtara ekwentị. Dị Korea na-ahapụ anyị Exynos 9825, mgbawa ohuru ohuru gi.
Exynos 9825 na-ehi ụra izu ndị a, ekele maka ihe anyị nwere ike ịmara na nkọwa ụfọdụ nke nhazi a nke ika Korea. Ọ bụ nke mbụ ha hapụrụ anyị arụpụtara na 7 nm, nke bu ihe di nkpa di nkpa maka ulo oru. Ọzọkwa, enwere mmelite arụmọrụ.
Ozuola akụkụ dị iche na 9820 nke e gosipụtara na February nke afọ a na Galaxy S10. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị ụfọdụ ndozi na ya. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ịrụ ọrụ ka mma site na usoro nhazi ọhụrụ a n'ime oke njedebe ya. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ ọzọkwa na ọ bụ 5G, ekele maka modem nke ụdị Korea.
Exynos 9825 gosipụtara ikike Galaxy Note 10 na ikpo okwu Geekbench
Otu n'ime nkọwa dị mkpa na Exynos 9825 bụ na iji ụlọ ọrụ Exynos 5100 modem ahụ, ọ ga-adaba na 5G. Ya mere, ọ gaghị abụ ihe ijuanya na abalị a anyị hụrụ otu n'ime ụdị ndị a nke Galaxy Note 10 nso yana ndakọrịta 5G, ekele maka nchikota a. Ebumnuche nhazi ahụ maka njedebe dị elu, yana nkọwa dị ike. Ndị a bụ akụkụ kachasị mkpa gbasara ya:
Mkpebi ihuenyo WQUXGA (3840 × 2400), 4K UHD (4096 × 2160)
5G dakọtara na Exynos 5100 Modem
Ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ihe nhazi ahụ Samsung gosipụtara na Febụwarị nke afọ a, anyị nwere ike ịhụ na ịwụ elu dị elu abụghị nke a. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ụfọdụ ndozi ndị dị mkpa na processor. O nwere ike ịbụ na itu kachasị mkpa nke emere na Exynos 9825 bụ nke ahụ na-ezo aka n'ichepụta usoro. Ọ bụ ebe mgbanwe dị ukwuu na ụlọ ọrụ ahụ wee si otú a na-enye ohere ịrụ ọrụ nke ọma ma dị ike processor.
Na mpempe akwụkwọ ọ na-ekwe nkwa obere oriri ike, nke ga-ekwe ka ekwentị ndị na-eji ya rụọ ọrụ nke ọma, na mgbakwunye inwe arụmọrụ ka mma. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ọnụ ọgụgụ na ihe ike oriri nke ekwentị ndị a ga-eso onye nhazi ahụ. Dị ka ọ dị na mbụ, Exynos 9825 nwere NPU agwakọtara, maka ihe omume niile metụtara ọgụgụ isi. Ke ofụri ofụri, ọ bụ a processor na-ahapụ gị nwere ezi uche, na mgbakwunye na anya isi premiere nke Korean ụlọ ọrụ na 7 nm. Nke a n'onwe ya bụ ihe dị mkpa maka ha, nke ga - eme ka ndị nrụpụta ha ka mma megide asọmpi dị ugbu a.
N’abalị a, anyị ga-ahụ Galaxy Note 10, igwe izizi jiri Samsung processor ọhụrụ a. Thelọ ọrụ ahụ agwaghị anyị ihe ọ bụla gbasara ha rue ugbu a. O kwere omume na ngosi nke ngwaọrụ n'abalị a ka a ga-enyekwu data maka arụmọrụ nke ngwaọrụ ndị nhazi a, ọ bụ ihe na-emekarị n'ụdị ihe omume a. Ya mere, n'ime awa ole na ole anyị ga-amatakwu ihe banyere ihe anyị nwere ike ịtụ anya na Exynos 9825 a. Gụnyere. N'abalị a, anyị ga-amatakwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Exynos 9825: Nhazi nke 10 Galaxy Note bụ ọrụ
Enwere ike ịnwe Xiaomi Mi 9 5G n'oge na-adịghị anya
Gagharịa mmanya kacha njọ na Philadelphia na Anwụ na-acha Mgbe Niile: Ndị Ìgwè Na-aga Mobile